Ukugqoka emshinini weplastiki
Indlu Ngezandla zakho siqu
Ukusebenza ngendwangu yepulasitiki kuhle ukuthi awukwazi ukudala nje izivalo ezinhle ezinhle, kodwa imikhiqizo ehlukene emithathu. Lezi zihlotshaniswa zendabuko, nezitsha ezihlukahlukene zezindlu noma izindlu ezincane. Ukugqoka emshinini wepulasitiki kuyinto elula, ngoba isimiso sokusebenza asifani nesekhanda ngendwangu evamile.
Ukuhlobisa nge-Volumetric epulasitiki
Sinikeza ukucubungula isifundo esilula, indlela yokugqoka emshini weplastiki, usebenzisa isibonelo sendlu. Isebenzisa ubujamo bejometri elula begodu nomsebenzi omncani khulu ngemicu.
Noma yikuphi ukudayiswa kwesikhumba seplastiki kuqala ngokukhethwa kobukhulu beseli. Okukhulu, uma kuqedile umkhiqizo ophelile uzoba. Kuhle kakhulu ukuqala ngobukhulu obujwayelekile.
Sika isiqeshana esisodwa sisekelo kanye nemininingwane emibili - izindonga zangaphambili nangemuva.
Okulandelayo, sidinga izingxenye ezimbili zephahla kanye namagceke amabili endlu ngokwayo.
Okokuqala thatha izindonga zangaphambili nangemuva. Sisebenzisa imibala emibili nje kuphela: eyinhloko yodonga kanye nokungafani komnyango. Emdongeni ongemuva ushiye isikhala esingenalutho, ngemuva kwesikhashana kuzoba nengxenye ehlanganisiwe yokwenza ivolumu.
Isigaba esilandelayo somsebenzi ngendwangu yepulasitiki yokwenza imidwebo kuyoba yincenye. Zifanayo. Phakathi nendawo siphinde sishiye izindawo ezimbili ezingenalutho ukuze sihlanganise izingxenye ezihlotshisiwe ezihlukene.
Manje sidinga ukuhlanganisa lezi zindiza: le ndlela yenza kube lula ukwenza indlu yethu ibe mkhulu futhi ibe mnandi kakhulu. Kodwa akekho okukuvimbela ukuthi uhlanganise lezi zakhi ngokuqondile.
Yileyo ndlela imininingwane yokwakheka kwendlu yethu evela ku-tovas plastic look.
Manje sekuyisikhathi sokubeka zonke lezi zikhala. Silala etafuleni yonke imininingwane e-oda lakho.
Isinyathelo ngesinyathelo sithunga imininingwane yesisekelo. Zama ukulungisa ubukhulu bezintambo ngendlela yokuthi amangqamuzana avinjelwe ngokuphelele futhi azikho izibani ezisele.
Ngakho, isisekelo nezinhlangothi zixhunyiwe. Okulandelayo, sidinga ukuxhuma izindonga ndawonye.
Sifihla ukuphela kwentambo ngale ndlela elandelayo, ngakho ngeke iqale ukuqhuma futhi isakhiwo sizobe siphephile.
Ngokuhlukile, siqoqa uphahla. Ukuze senze lokhu, sidonsa imininingwane yayo futhi sisebenzise umkhawulo ngentambo.
Sizolungisa uphahla esisekelweni ngosizo lweglue. Sivumbela ukuphela kwezindonga bese siwafihla.
Isigaba sokugcina umhlobiso wokudayiswa emgqonyeni weplastiki. Ukuze wenze lokhu, izinto ezihlukahlukene zifanelekile: iziqu, ubuhlalu, amahlumela noma ama-rhinestones. Sizozilungisa futhi nge-glue.
Uma ufuna ukwenza i-loop encane, vele ubophe inaliti nomcengezi esitokisini esiphezulu ophahleni. Khona-ke ungakwazi ukufaka indlu yethu bese uyisebenzisa njengesihlahla sikaKhisimusi noma ukuhlobisa ekamelweni.
Amathoyizi avela emasokisini ngezandla zakhe
Amacala avela emabhodleleni epulasitiki
I-patchwork eyenziwe nge-jeans endala
Indlela yokwenza isikhwama sephepha?
Umthombo kuleli zwe ngezandla zabo
Iqhwa lokufakelwa ngezandla
I-Decoupage Cutting Board
Ukugqoka izibambo ezinamakhanda
Imikhumbuzo eyaziwayo yoNyaka Omusha
Ukuqothula abaqalayo - isigaba samakhono
Chalma ngezandla zami
Crown of Foamiran for princess encane
I-Valentines - i-scrapbooking
I-Goulash eyenziwe yikhukhu lezinkukhu
Indlela yokwandisa i-estradiol kwabesifazane?
U-Roseola ezinganeni - konke okudingayo ukwazi ngenkinga
Izipho zoNyaka Omusha ezinganeni
Ingabe kukhona uthando kude?
Usawoti wezinwele - izindlela zokupheka ezingcono kakhulu zokukhula, ukuqinisa kanye nezinwele zezinwele
UMark Zuckerberg wathola umklomelo ekuphakamisweni "kwe-Inthanethi iphrojekthi" ... e-Kazakhstan
UGeorge Clooney, uJulia Roberts noGwen Stefani baba izivakashi ze "Carpool Karaoke"
Ingubo kanye nejaji
I-kitten enamehlo aluhlaza okwesibhakabhaka nohlaza ithola inthanethi!
Ungathola kanjani uhlaza kusuka izingubo?
Ifenisha ye-Modular ye-hall - indlela yokuhlomisa kahle umzila?
Izinhlobo zokukhulelwa ngokweqile
I-Pea ekudleni ukulahlekelwa isisindo - izinketho ezingcono kakhulu zokulahlekelwa isisindo
Indlela yokuphatha i-rheumatism?
Yikuphi ukudla okuqukethe i-vitamin B3?
Ukulungiswa kombono we-Laser - inzuzo nokuqeda
I-Royal Exhibition Centre